Igumbi lokulala ezintathu eKatepwa Lakefront - I-Airbnb
Igumbi lokulala ezintathu eKatepwa Lakefront
Icala eliphambi kwechibi laseKatepwa elineembono ezintle zentlambo - konke okufuneka ukwenze kukuzisa ukutya kwakho kunye newayini! Iikhilomitha ezimbini ukusuka kunxweme oluphambili, indawo yokutyela kunye nokuqaliswa kwesikhephe kunye nendlwana yethu ibekwe ngqo ngaphesheya kwesitrato ukusuka kwiTransCanada Trail. Ugcino lwendlu olulula ngeveki. Imigangatho emibini ene-BBQ kunye nendawo yokutyela yangaphandle. Indawo yokupaka izithuthi eyaneleyo kunye neyadi enkulu ukuze abantwana baphonononge. I-intanethi, intambo kunye ne-Google Hub Max. Indawo enkulu yokubasa kunye neenkuni.
Iimbono ezintle zechibi kunye nentlambo ukusuka ekhitshini, kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala elikhulu. Ubuninzi bokukhanya kwelanga kwendalo kunye neendawo ezininzi zokugoba ngencwadi ngaphakathi nangaphandle.
Simi kwicala elingasentla leKatepwa Lake kwaye kumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka eMain Beach, iKatepwa Beach Bar, kunye neRoccos (ukutya kwamaxesha athile, i-ayisikrimu kunye negrosari). Simalunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwinduli ye-ski (Fort Qu'Appelle) kwaye ukuloba yeyona nto iphambili apha unyaka wonke.
Abanini kwipropathi ekufutshane- ekhoyo ngalo naluphi na uncedo olunokufuneka-okanye nje isosi yeBBQ ukuba uphelelwe!